Iprojekthi yeMephu yeeMilinganiselo zeNhlabathi kwiLatin America naseCaribbean - i-Geofumadas
NgoFebruwari, 2016 cadastre, Okufumaneka, UkuCwangciswa kweziThili
I-Lincoln Institute for Land Land ibiza amavolontiya avela kuzo zonke iidolophu zaseLatin America naseCaribbean ukuba bathathe inxaxheba ekwakhiweni kweMigangatho yeMephu Imephu yommandla. Lo msebenzi uza kwenzeka kwi-8 kaFebruwari ukuya kwi-31 ka-Matshi ye-2016.
Ukukwazi ukuziphatha kweemarike zomhlaba kubaluleka kwinkcazo engcono yemigaqo yedolophu. Ngoko ke, ukuphuhliswa kwebhanki yeenkcukacha ze-georeferenced and systematized of field and access to free will be a key tool for urban planners.
"Data 5 kwisixeko sakho!" Ukuthatha inxaxheba kweli phulo ilula. 5 ifuna kuphela data okanye iinqobo ngaphezulu umhlaba yangoku kwisixeko yakho uze ubhalise umsebenzisi imaphu GIS Web zindawo emephini.
Ukuthatha inxaxheba kukhululekile kwaye kukhululeka. Kujoliswe kubaqeqeshi, abafundisayo kunye namagosa karhulumente axhulumene nemigaqo-mhlaba yasezidolophini. Amavolontiya aya kubonakala njengabaxhasi abangabonakali kwiwebhusayithi yeprojekthi kwaye kwingxelo yomcimbi wokugqibela.
Okwangoku yiprojekthi eyenzelwe kwaye ilawulwa nguMario Piumetto no-Diego Erba, ngokubambisana neNkqubo yeLatin America kunye neCaribbean yeLincoln Institute. Ukufumana ulwazi olungakumbi malunga neprojekthi kunye nendlela yokuthatha inxaxheba, nceda uqhagamshelane neValor Suelo América Latina.
Iimarike zomhlaba zichaphazela kakhulu ukuphuhliswa kwezixeko, kukho ukubaluleka kolwazi lwabo ukuphucula imigaqo-dolophu yasezidolophini.
Amaxabiso ezweni eziguquguqukayo kakhulu kuyo yonke le ngingqi, kwakunye nokusebenza ezi marike, Noko ke, kukho kwibhanki ingcaciso ngale miba, georeferenced, ukufikelela lwengingqi kunye ukufikelela simahla ukuxhasa umsebenzi abacwangcisi zasezidolophini kunye nezifundo athelekisekayo.
Le projekthi inayo Injongo ephambili yokwakha imephu yeenqobo zokubaluleka komhlaba wasezidolophini eLatin America naseCaribbean ngokusekelwe kwidata eqokelelwa ngamavolontiya kwisikhokelo sobungakanani obukhulu, obukhululekile kunye novulekileyo (ukuxhamla abantu). Ukubhaliswa kunye nokusetyenziswa kweedatha kuya kwenziwa kwiqonga le-GIS efini.
Isimemo sibhekiswe kubaqeqeshi, abafundisi kunye namagosa karhulumente axhumene nemigaqo-nkqubo yomhlaba, kwaye isebenza kuze kube ngu-Matshi we-31. Amavavolontiya aya kubonakala njengabambisene kunye neziboniso zedolophu kubini kwiwebhusayithi nakwiingxelo ezipapashwe, kwaye baya kufumana ulwazi ixabiso lehlabathi elivelisiweyo.
"Idatha ye-5 yedolophu yakho"! Yiloo ntetho yefowuni. Ukuthatha inxaxheba kuyilula, kufuna igalelo leminye imininingwana ye-5 (amaphupha ebalazweni) zamanani ezikhoyo zomhlaba kwisixeko esihlolisisiweyo.
Luhlobo luni lwedatha kulindeleke ukuba luqokelelwe
Idata ukufaka isandla
Kulindelwe Idatha yexabiso le5 yedolophu; ukuba unokuba negalelo elininzi, liza kuba libalaseleyo kwaye liya kwenza ukuba kube nolwazi olungcono kumgangatho.
Izinto ezifunwayo ezithengiswayo, izihlobo, abaqhelana nabo, kummandla, kumaphephandaba, kwiiwebhusayithi okanye kumaphephancwadi akhethekileyo abonwa njengobulunga; Unokuqhagamshelana nabaqeqeshi abaye baqhuba i-appraisal ethile.
Kuzo zonke iimeko, kufuneka unikezele idatha ukusuka kwiidolophini, xabiso ekhoyo y kuphela emhlabeni, kwiqashiso ngaphandle kokwakhiwa okanye kwiimeko apho ixabiso lazo lihlulwa.
Kwidatha nganye, kulindeleke ukuba iqokelele ulwazi olulandelayo
Indawo: idilesi okanye indawo esondeleyo, evumela ukuyifaka ngokufanelekileyo kwimaphu.
Ixabiso langoku lomgangatho, imitha nganye kunye needola.
Iinkonzo ezikhoyo Uya khetha enye yezi ndlela zilandelayo: amanzi 1- kunye nombane, amanzi 2-, umbane kunye yabahambi 3- okanye ngaphandle iinkonzo.
Ubukhulu beLote buhlalutyiweyo. enye yezi ndlela zilandelayo ziya kukhethwa: 1- m1.000 ngaphantsi kwe 2, 2 kunye 1.000 5.000- phakathi m2, 3- phakathi 5.000 kunye 10.000 2- m4 okanye ngaphezulu kwe 10.000 m2.
Umthombo wolwazi. enye yezi ndlela zilandelayo ziya kukhethwa: yokuthengisa 1-, apreyizali 2- / ixabiso ingakumbi, umnikelo 3- kwaziswa yi-offeror, okanye 4- 5- ukunikela epapashwe ulwazi enikwa enikezwe abaqeqeshiweyo.
Ifowuni ibonisa inkqubela yeMaphu yeMilinganiselo kwiGIS yamafu
Post edlulileyo«Edlulileyo Masters Online e Geographic Information Systems
Post Next kweminyaka 10 bokufudukela iqonga geospatial - Microstation Geographics - Oracle SpatialOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwiProjekthi yeMephu yeeMpawu zoMhlaba kwiLatin America naseCaribbean "
USergio Sosa Quilaleo uthi:
Siyayixabisa umdla kule projekthi!
Ifowuni yiyo yonke iMatriki yaseMelika, ngoko yonke idatha yeBuenos Aires ongayinayo iya kwamkelwa.
Ukuthatha inxaxheba kulula! Ungangena kwiblogi yeprojekthi: http://valorsueloamericalatina.org/como-participar/
Ukuba unemibuzo, ndinokukukhokela! Xoxa kwi-imeyile: valoresinmobiliariosal@gmail.com
Arq uSergio Sosa Quilaleo
Okokuqala, kukho amathuba eBuenos Aires, kwaye okwesibini kunenkxaso yobuchwepheshe.